Entlebuch Mountain Imbwa, imbwa inoyevedza | Imbwa dzepasi rose
Imbwa yeEntlebuch Boyero imbwa ine hura ine chiso chinotapira uye chitarisiko.. Anoita kuti adikanwe kubva panguva yekutanga yaanosvika kumba, uye ichi chinhu icho vana vadiki mumhuri vachanyatsoda.
Hazvina kuoma kudzidzisa, chero bedzi mushure mechikamu chega chega chinopihwa mubairo nemumwe mutambo, saka tinogona kutaura tisingakanganise kuti irudzi rwakanyanya, rwunozivikanwa 🙂. Zvizive.
1 Kwakatangira uye nhoroondo yeEntlebuch Boyero
3 Maitiro uye hunhu hweEntlebuch Boyero
6 Mifananidzo yeEntlebuch Mountain Imbwa
Kwakatangira uye nhoroondo yeEntlebuch Boyero
Yedu protagonist imbwa yakaberekerwa kuSwiss Alps, kunyanya kubva kumasipala unonzi Entlebuch. Zvinotendwa kuti zvinodzika kubva pamolossus yakaunzwa nevaRoma vekare kunyika iyoyo yakanangana nezana ramakore rekutanga BC. C. Rudzi urwu rwainge rwakasiyana naye muna 1889, uye muna 1913 zvienzaniso zvina zvakaratidzwa pamutambo pamwe nemuswe wakatemwa. Kubva ipapo zvichienda mberi, anogona kuwanikwa mukatalog yeiyo »Swiss Kennel Club».
Iyo imbwa iri pakati-hombe, inorema makumi maviri kusvika makumi matatu kuva mukadzi zvishoma zvishoma. Inoyera pakati pe42 ne52cm, uye ine muviri wakasimba, iine makumbo akapamhama akagadzirira kufamba nzendo refu. Musoro wayo wakareba, uye une nzeve dzakarembera. Mhino yayo yakarebeswa uye maziso, akatsvuka muvara, akaenzana zvakaenzana nemutumbi wese. Vhudzi iri repakati nepakati, uye tricolor (nhema, chena uye shava).
Ane hupenyu hunotarisirwa hwe Makore 11 kusvika 15.
Maitiro uye hunhu hweEntlebuch Boyero
Hunhu hwehunaku hunoshamisa hunofadza. Akangwara, anofambidzana uye akavimbika. Anoda kuve nemhuri yake zvakanyanya, asi achanakidzwawo nekurovedza muviri, chimwe chinhu chaanofanira kuita mazuva ese kuti afare uye, sezvinei, ave noutano hwakanaka.
Zvakare, iye akanaka kwazvo nevana, saka iye akakura kwazvo kwavari 🙂.
Mumusika mune mhando dzakasiyana siyana dzechikafu chembwa, zvimwe zvinodhura kupfuura zvimwe, uyezve zvimwe zvinokurudzirwa kupfuura vamwe. Neichi chikonzero, dzimwe nguva zvinonetsa kusarudza imwe, nekuti vese vanovimbisa chinhu chimwe chete: kuti ndivo chikafu chakanakisa chembwa yako. Asi zvino iwe verenga chinongedzo chitaridzi uye ... zvinhu zvinoshanduka.
Uye ndeyekuti yakawanda yezvikafu zvakachipa pamusika ndeiya inogadzirwa neimwe yezvinhu zvakachipa zvikuru: zviyo. Kuti, Kune mhuka inodya yakadai sembwa, yakanaka ingave yekuipa chikafu chakapfuma mumapuroteni emhuka, uyezve umupe mvura zuva nezuva.
Hutsanana hunofanirwa kuve chikamu chehupenyu hwese imbwa yekumba. Sezvo iri inonakidza mbwanana iwe unofanirwa kutanga kukwesha vhudzi rayo kamwe pazuva, ichiwedzera kuwanda kusvika kumaviri kana kunyangwe matatu panguva yekudonhedza mwaka, kubvira painoburitsa bvudzi. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kujairira kugezwa, kamwe chete pamwedzi.
Kubva pazuva rekutanga iwe raunogara hupenyu hwako naye, unofanira kumutora kuti ufambe, kunze kwekunge iwe uchirwara hongu. Chero bedzi iine hutano, inofanirwa kuona vamwe vanhu uye dzimwe imbwa, kunhuwa kunhuwirira kwakasiyana, kutamba kunze kwemusha,… muchidimbu, kuzvibata seimwe imbwa.
Asi hongu, usakanganwa kutamba nayo zvakare mukati meimba uye / kana gadheni kana iwe unayo. Imhuka inonakidzwa nekunakidzwa nemhuri yayo, uye une chokwadi chekuva nenguva yakanaka nayo.
Iwe unofanirwa kuyeuka kuti imbwa yakatsva simba rayo rese ichinakidzwa imbwa ine hura iyo ichave yakanyarara kwazvo kumba. Izvi zvinoreva kuti havazohukura, kuputsa zvinhu, kana kusazvibata. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti ugare uchitora nguva shomana yekutamba naye mitambo, nekuti mabhenefiti ndeenyu mese.
Hutano hweEntlebuch Mountain Imbwa zvakanaka, chero bedzi iye achigamuchira kutarisirwa kwese kwakamunakira. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukadya chikafu chemhando yepamusoro, kuenda kunorovedza muviri, uye kutora vet yako nguva dzose kuti uongororwe, mhuri yako yevanhu inogona kuzorora zviri nyore. Asi zvakakosha kuti iwe uzive kuti unogona kutambura mudumbu kumonyoroka, chirwere chakajairika mumarudzi makuru embwa, uye hudyu dysplasia.
Saka kana iwe ukaona kuti anotanga kufamba nenzira isinganzwisisike, kana kana achinyunyuta paunomupuruzira mune chimwe chikamu chemuviri wake, bata vet wako nekukurumidza.
Watsunga here kuwedzera mhuri yako neEntlebuch Mountain Imbwa? Saka chinhu chekutanga kukukorokotedza iwe, nekuti makore mashoma ekunakidzwa nerudo akakumirira iwe nemhuri yako. Mutengo wembwanana werudzi urwu unosiyana zvakanyanya zvichienderana nekuti unoutenga muchitoro here kana mukennel, asi kana ukatengwa munzvimbo yehunyanzvi, inozivikanwa mune imbwa idzi, mutengo unenge 1000 euros.
Mifananidzo yeEntlebuch Mountain Imbwa
Kana iwe uchida kuziva uye uchida kuona mimwe mifananidzo yeiyi yakanaka imbwa, heano mamwe acho:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Entlebuch Mountain Imbwa, imbwa inoyevedza